Baahida loo qabo Travel Insurance Medical | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Baahida loo qabo Travel Insurance Medical
qayb ka mid xiiso leh ah safraya dibadda waa la saadaalin Karin ee waayo-aragnimo ah. Marka aad u safarto dal qalaad, aad loo soo bandhigi doonaa in dhaqamada kala duwan, goobaha, iyo aragnimada. Xitaa haddii aad qaar ka mid ah cilmi, aad hubto in la qaado by lama filaan ah oo ay qaar ka mid ah waxa aad ka heli. Nasiib darro, dhammaantiin ma aha mid la yaab leh oo aad la kulanto waxaa laga yaabaa in kuwa wanaagsan, oo kaliya sababtoo ah waxaad tahay fasax macnaheedu ma aha inaad tahay difaaca in wax la yeelo.
Waxaa laga yaabaa inaad ma doonayaan in ay aaminsan yihiin in shil dhici kartaa in aad, laakiin waxaad u baahan tahay in loo diyaar garoobo macquul ah in, ama mid ka mid ah u jeclaaday, u baahan doontaa daryeel caafimaad halka uga fog yahay guriga. Haddii ay tahay mid fudud sida jaba aad ilig, dhaawac canqawga, degaysa qandho ama heart attack, hesho daaweynta caafimaadka ee aad u baahan tahay ma laga yaabaa in sida ugu fudud ee waxa uu noqon lahaa ee dalka Mareykanka.
Saas waxaa ugu wacan ugu qorshaha caymiska caafimaadka dhaqanka ma kordhiyo imaad ka baxsan waxa dhacaya on ciidda American. Taas macnaheedu waxa weeye in aad noqon kartaa on jillaab ku for kun oo dollar in kharashka caafimaadka ee daryeelka aad hesho dibada. Tani waa sababta socotada lahayn waa in aan caymiska caafimaadka safarka. Kuwani qorshe khaas ah u tegi doonaa meesha aad caymiska guriga maayo, hubinta in aad awood u yeelan doonaan in ay raaxaysan aad safarka oo aan ka werwerayn ku saabsan dhacdo la saadaalin karin ee.
Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan caymiska caafimaadka safarka iyo sababta ay tahay in aad ka fikirto waxa helitaanka, arki guide hoos ku qoran.
Waa maxay sababta Travel Insurance Medical fikrad fiican?
• U safarka ah dalka shisheeye bilaabi kartaa khataraha caafimaad oo tiro badan. Tusaale ahaan, tayada biyaha ma laga yaabaa in ay isku mid noqdaan, taasoo keentay in caabuqyada halista ah. cimiladu kala duwan adkeynin laga yaabaa in aad xaaladaha pre-jira, sida cudurrada wadnaha ama xasaasiyad, tegitaankiisa aad xanuunsan-u qalabaysan in ay la tacaalaan xaaladda.
• Xitaa haddii aad horay u leedahay caymis caafimaad, ma aad dabooli laga yaabaa in meel ka baxsan Maraykanka. Taas macnaheedu waxa weeye wax kasta oo jirooyin ama dhaawacyo aad la kulmi halka safarka dibadda waxay keeni kartaa in biilasha caafimaad ay aad u sarayso.
• Haddii aad booqanaysid qayb ka fog oo dunida oo u baahan daryeel caafimaad oo deg deg ah, laga yaabaa in aad u baahan tahay in la daadgureeyay isbitaalka. Haddii aan hoos imaad caymis sax ah, this kici kartaa tobanaan kun oo doolar on top of kharashka kale ee la xidhiidha wax kasta oo.
• Xaaladaha qaarkood, yaabaa in loo baahdo in aad leedahay caymis caafimaad safarka mudada safarkaaga. Tusaale ahaan, Kooxda martida ah in Russia, Cuba, iyo quruumaha ku Aagga Schengen ee EU waa in la caddeeyo waxay leeyihiin caymis.
• Inkastoo caymiska caafimaadka safarka noqon kartaa mid aad u qiimo badan, waxaa sida caadiga ah la xisaabay in ka yar 10 boqolkiiba dhammaan waxyaabaha caymiska safarka iibsaday by safra, isagoo aan qaali ahayn.
Sidee Travel Insurance Medical Waxaad la difaaco
caymiska caafimaadka • Safarka ka duwan yahay caymiska safarka Heerka ugu horayn in in aysan u bixiyo hoos imaadka kharashka la xiriira kansal, dib u dhac ama Goynta.
• Iyada oo caymiska caafimaadka safarka, waxaad heli kartaa caymiska haddii ay dhacdo xaalad degdeg ah caafimaad oo lama filaan ah. Kuwani waxay u dhaxayn kartaa ilig jaban ama xumad oo cunto lagu sumoobo in dhaawacyada naf-gooyada iyo wadne.
• Mid ka mid ah faa'iidooyinka hoose siyaasadaha waa in ay ku siiyaan 24/7 taageero luqado inuu kaa caawiyo inaad la shaqeeyaan shaqaalaha daryeelka caafimaadka waddan shisheeye.
• siyaasadaha Kuwani caadi ahaan bixiyaan caymiska waxa guud ahaan loo arkaa caafimaad ee muhiimka ah kharashka. Waxaa ka mid ah booqashooyin qolka xaaladaha degdegga ah, adeegyada geeddiga iyo gaadiidka kharashka in ay gaaraan xarunta caafimaadka ee ku habboon.
• Qorshayaasha ugu badan dabooli safar hal, laakiin waxa ay sidoo kale waxaa laga iibsan karaa si ay u daboosho muddo ilaa iyo inta 12 bilood. caymis caafimaad muddada dheer kuwa si joogto ah u safri ama muddo dheer sidoo kale laga iibsan karaa isabdal ah ee bil kasta.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “Inta badan cajiib ah Jaamacadaha The In Europe” gal your site? sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/the-need-for-travel-medical-insurance/- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
halkan Download PDF ah for this article kaas oo la siiyo badbaadi Tareen A by Adeegyada Waayeelka ee Illinois
#caymis #travelinsurance safarka
Jenn bilaabay in industry caymiska ee 2007. Gudahood iyada sanadka ugu horeeya, ayay mid ka mid ah hogaanka ahaa 10 saarayaasha ee dalku ku jiro mid ka mid ah ugu weyn iyo hay'adaha caymiska ugu caan. Lives ee Illinois iyo sii iyada focus on iyada shaqo, qoyska, iyo safaradiisa. - Waxaad halkan si aad u riixi kartaa ila soo xiriir